AmaKoala ashintsha indlela aziphatha ngayo ngenxa yamazinga okushisa anyukayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - UCaroline Marschner
I-Los koalasLezi zilwane ezinobungane ezivela e-Australia zinezikhathi ezimbi kakhulu ngenxa yokwanda okuqhubekayo kwamazinga okushisa. Bona, abachitha impilo yabo ezihlahleni, bashintsha indlela abaziphethe ngayo ukuze bangafi ngokoma.
Njengoba amazinga okushisa enyuka kuphela, iqembu lodokotela bezinto eziphilayo kanye nodokotela bezilwane banqume ukubeka imithombo yokuphuza nemithombo yamanzi eduze kwabo bese beyirekhoda ngamakhamera okuphepha. Ngakho-ke bakwazi ukukuthola lokho beza ukuzophuza, okuthile okudonse ukunaka kwabo.
AmaKoala yizilwane lezo bachitha usuku ezihlahleni, kudla amaqabunga. Futhi yikho kanye kulokhu kudla lapho bathole wonke amanzi ababewadinga; ngakho-ke zazingadingi ukuba neminye imithombo yamanzi. Ngakho-ke, lapho ochwepheshe bebona ukuthi baya emithonjeni ababeyibeka ukuze bazenelise, bakhathazeka.
Babonile ukuthi beza ukuzophuza ebusuku, ngoba bayizilwane zasebusuku, kodwa futhi nasemini. Kepha okubamangaza kakhulu ukuthi bakwenze ngesikhathi sasebusika. Ngakho-ke, ngesikhathi sasehlobo isimo singaba sibi kakhulu futhi sibe sibi ngokweqile.
Ngokukhuphuka kwamazinga okushisa, inani le-koala lingancipha, into ebeka izikhungo zase-Australia ekuqapheleni, njengoba izihlahla zilahlekelwa amaqabunga njengendlela yokuphila, okusho ukuthi lezi zilwane ziphelelwa ukudla namanzi.
Noma kunjalo, ochwepheshe bakholelwa ukuthi ukubeka imikhombe yamanzi ezihlahleni kungasiza i-koala ukuba iqhubekele phambilinoma ngabe lokho kusho ukuthi kufanele ushintshe indlela oziphatha ngayo.
Lesi yisifo se-marsupial esinezinkinga ezinkulu vele ngenxa ye-chlamydia, isifo esithathelwana ngocansi esithinta izingxenye zokuzala ze-koala, kodwa futhi namehlo nomphimbo. Kwezinye izingxenye kufika kuma-90% wabantu abangenwa yileli gciwane. Uma sengeza ukufudumala kwembulunga yonke, sizobona ukuthi i-koala isengozini kangakanani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ngokukhuphuka kwamazinga okushisa, ama-koala ashintsha indlela aziphatha ngayo